Fanaovan-tsonia ny PPTD | Primature
Fanaovan-tsonia ny PPTD
23 juin 2022 23 juin 2022 Aucun commentaire
Lapan’i Mahazoarivo, ny 23 jona 2022 – Notanterahina teto amin’ny lapam-panjakana Mahazoarivo androany ny fanaovan-tsonia ny fandaharanasa faharoa momban’ny fampiroboroboana ny asa mendrika eto Madagasikara (Programme Pays pour le Travail Décent – PPTD) ho amin’ny taona 2021-2023.
Ny governemanta Malagasy tarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny « Organisation Internationale du Travail » – OIT no nitarika ny lanonana, ary niara-nanao sonia tamin’ny mpandrindra nasionalin’ny sendikan’ny mpiasa sy ny mpampiasa eto Madagasikara, sy ny solotena avy amin’ny vondron’ny orinasa Malagasy. Natao tamin’ny fampitan-davitra avy any Genève kosa ny sonian’ny Tale Jeneraly Lefitry ny OIT, Andriamatoa Moussa Oumarou Diallo.
Natao izao fanaovan-tsonia izao taorian’ny fahombiazan’ny fandaharanasa voalohany nifarana tamin’ny taona 2020. Zavatra roa lehibe no niraha-nanaiky fa tokony ho tanterahina, dia ny famoronana asa mendrika ahitam-bokatra ; ary ny fanatsarana sy fanitarana ny fiahiana ara-tsosialy ho an’ny mpiasa.
Nohamafisin’ny Praiministra fa mifampiankina ary tokony hifameno ny anjara andraikitry ny mpisehatra rehetra amin’ny fanatrarana ireo tanjona ireo ; ka mila samy mametraka fehin-kevitra mazava hahatongavana amin’ny tanjona iraisana ho tombotsoan’ny rehetra. Araka izany dia nanamafy ny fahavonany amin’ny hametrahana ny paikady rehetra mifanadrify aminy ny governemanta Malagasy.
Nanatrika izao fanaovan-tsonia izao ireo mpikambana ao amin’ny governemanta, ny mpiara-miombon’antoka, ary ny solontenan’ireo mpisehatra rehetra amin’ny asa eto Madagasikara.
← CONSEIL DU GOUVERNEMENT du Mercredi 22 juin 2022
Tetikasa fanarenana roa sosona →
Réunion avec les Partenaires Techniques et Financiers